Ongororo pfupi yebasa raCésar Vallejo | Zvazvino Zvinyorwa
Nhetembo basa raCésar Vallejo
Encarni Arcoya | | Vanyori, Nhetembo
Mufananidzo - Wikimedia / Enfo
Vallejo Akanga ari mumwe wevanonyanya kukosha vanyori vezana ramakore rechiXNUMX, kwete chete munyika yake, Peru, asiwo mune dzimwe nyika dzinotaura chiSpanish. Akaridza dzakasiyana siyana zvinyorwa zvemhando yepamusoro, chinonyanya kuzivikanwa yaive nhetembo. Muchokwadi, akatisiira mabhuku matatu e nhetembo izvo zvakaratidza nguva, yatichaenda kuongorora muchinyorwa chino.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iro basa renhetembo remunyori mukuru uyu, ipapo isu tichazokuudza nezve rake basa renhetembo.
1 Vatema vanozivisa
3 Nhetembo dzevanhu
4 Zvido zveCésar Vallejo
Vatema vazivisa ...
Bhuku Vatema vanozivisa ndomunyori wekutanga kunyora. Akazviita mukati memakore 1915 na1918, kunyangwe hazvo isina kuburitswa kusvika 1919 nekuti munyori akatarisira chirevo naAbraham Valdelomar, chimwe chinhu chisina kuzadzikiswa.
Muunganidzwa wenhetembo ndewekuti rine nhetembo 69 dzakakamurwa kuita zvidimbu zvitanhatu kuwedzera nhetembo yekutanga yakanzi "Vatema Heralds" inova zvakare inopa bhuku zita rayo. Iwo mamwe akarongeka seinotevera:
Agile mapaneru, ane huwandu hwese gumi nhetembo.
Madhiri, ane nhetembo ina.
Kubva pasi, iine nhetembo gumi.
Imperial Nostalgia, inoumbwa nhetembo gumi nenhatu.
Kutinhira, uko kune nhetembo makumi maviri neshanu (ndiro dombo rakakura kwazvo).
Nziyo dzinobva kumba, dzinopedza basa nhetembo shanu.
Ichi chekutanga muunganidzwa wenhetembo naCésar Vallejo anopa a shanduko yemunyori iye amene sezvo dzimwe dzenhetembo idzi dzinoenderana neazvino uye echinyakare metric uye strophic mafomu, ndiko kuti, kutevedza mutsara wezvakasimudzwa. Zvakadaro, kune zvimwewo zvakada kufanana nenzira yanyanduri yekuzviburitsa pachena pamwe nekuve nerusununguko rwakawanda kana uchidzitsanangura.
Misoro yenyaya dzakasiyana yakafukidzwa, inosanganisira kufa, chinamato, murume, vanhu, pasi ... zvese kubva mumaonero emunyori.
Pane nhetembo dzese dziri mubhuku iri, inonyanya kuzivikanwa uye kuongororwa zvakanyanya ndiyo inopa iro zita zita, "Vamiriri vatema."
Trilce (Tsamba ...
Bhuku Trilce yaive yechipiri yakanyorwa naCésar Vallejo uye pamberi nepashure zvine chekuita neyokutanga. Iyo nguva yaive yakanyorwa, mushure mekufa kwamai vake, kutadza kwerudo uye kunyadzisa, kufa kweshamwari yake, kurasikirwa nebasa, pamwe nenguva yaakapedza ari mutirongo nhetembo dziri chikamu chebhuku racho dzaive dzakaipa, nemanzwiro ekuregererwa uye mhirizhonga kune zvese izvo zvakange zvasangana nanyanduri.
Muunganidzwa uyu wenhetembo unoumbwa nenhetembo makumi manomwe nenomwe, hapana kana chimwe chazvo chine zita remusoro, asi chiverengero chechiRoma chete, chakasiyana zvachose nebhuku rake rekare, umo rimwe nerimwe raive nemusoro wenyaya uye zvakabatanidzwa pamwechete. Pane kudaro, ne Trilce imwe neimwe yakazvimiririra kune mumwe nemumwe.
Kana ari maitire ake enhetembo, pane kuzorora neizvo zvaizivikanwa nezvemudetembi. Mune ino kesi, kutsauka kubva pakuteedzera kana kukanganisa kwaive nako, anozvisunungura kubva kumametric uye rwiyo, uye anoshandisa mazwi akakwenenzverwa, dzimwe nguva akare, zvinoita kuti zvive zvakaoma kunzwisisa. Uye zvakare, ivo vanogadzira mazwi, vanoshandisa mazwi esainzi uye kunyangwe akakurumbira mazwi.
Nhetembo idzi ndedzehunhu, dzinotaura nyaya asi pasina kubvumira munhu kuti aone pasi padzo, sekunge kuita mutsetse pakati peizvo nzanga uye izvo munyori ari. Zvese zvaakasangana nazvo panguva yaakanyora basa iri zvinoita kuti vazadzwe nemarwadzo, kushushikana uye kunzwa kwekuvengana nevanhu nehupenyu.
Nhetembo Dzevanhu (Nhetembo ...
Mushure mekufa, iro bhuku Nhetembo dzevanhu rakaburitswa muna 1939 richisanganisira zvinyorwa zvakasiyana zvemudetembi kubva muna 1923 na 1929 (Nhetembo muprozi) pamwe nekuunganidzwa kwenhetembo «Spain, tora mukombe uyu ubve kwandiri».
Chaizvo, basa rine huwandu hwenhetembo makumi manomwe nenomwe, 19 acho ari chikamu chePoemas en prosa, chimwe chikamu, 15 kutaura chokwadi, kubva muunganidzwa wenhetembo Spain, tora uyu mukombe ubve kwandiri; uye zvimwe zvese zvingave zvakakodzera kubhuku.
Iri bhuku rekupedzisira nderimwe remabhuku akanakisa naCésar Vallejo uko "universal" iyo yakanyorwa nemunyori nekufamba kwenguva iri nani zvikuru uye yaakakunda nayo mabhuku epamberi akaburitswa.
Kunyangwe madingindira anoitwa naVallejo munhetembo dzake achizivikanwa nezvakagadzirwa kare, chokwadi ndechekuti pane musiyano munzira yake yekuzviratidza, zviri nyore kuti muverengi anzwisise, kusiyana nezvakaitika naTrilce, tsamba yake yapfuura.
Kunyangwe mumagwaro kuchine a chirevo pamusoro pekusagutsikana kwehupenyu nemunyori, Izvo hazvina se "kusava netariro" sekune mamwe mabasa, asi zvinosiya tambo yetariro, sekunge yaida kufurira vanhu vese kuitira kuti shanduko yepanyika ive pamwe kwete mumwe nemumwe. Nekudaro, inoratidza kunyepedzera kwepasi rakagadzirwa nenzira yakabatana uye yakavakirwa parudo.
Kuve wakawanda wekuwedzera kwemabasa matatu akasiyana, Nhetembo muprose; Spain, bvisa chirongo ichi kubva kwandiri; uye izvo zvinoenderana ne Nhetembo dzevanhu, chokwadi ndechekuti pane musiyano mudiki pakati pavo, ichijekesa akati wandei zvakasiyana zvichienderana nemabhuru avanoreva.
Zvido zveCésar Vallejo
Akakomberedza chimiro chaCesar Vallejo kune zvakawanda zvinoda kuziva izvo zvinogona kutaurwa nezvake. Imwe yacho ndeyekuti nyanduri uyu aive nechitendero Nekuti vese sekuru vake nasekuru amai vaibatana nechitendero. Wekutanga semupristi weMercedarian anobva kuSpain, uye wechipiri semunamati wechiSpanish akaenda kuPeru. Ndokusaka mhuri yake yainamata zvakanyanya, saka dzimwe nhetembo dzekutanga dzemunyori dzaive nemanzwiro echitendero.
Muchokwadi, munyori aifanirwa kutevedzera tsoka dzaasekuru vake, asi pakupedzisira akatendeukira kunhetembo.
Zvinozivikanwa kuti Vallejo naPicasso vakasangana kakawanda. Chikonzero nei mupendi wechiSpanish uye muvezi akaveza mifananidzo mitatu naCésar Vallejo hazvinyatso kuzivikanwa, kunyangwe zvichitaurwa, mumazwi aBryce Echenique, kuti zvese zvakabatana paCafé Montparnasse, muParis uye, kunyangwe vaisaziva imwe neimwe mumwe Apo Piccaso akaziva nezvekufa kwaVallejo, akafunga kutora mufananidzo wake.
Pane imwe dzidziso, naJuan Larrea, uko mushure mekufa kwanyanduri, mumusangano waakaita naPicasso, akazivisa nhau kwaari pamusoro pekumuverengera dzimwe nhetembo dzake, uko mupendi akadanidzira «Kune uyu hongu izvo Ndinoita mufananidzo ».
Vadetembi havawanzo kuve sosi yekukurudzira kwemafirimu. Nekudaro, izvozvowo hazviitike naCésar Vallejo uyo aidada kukurudzira, kuburikidza nhetembo yake "Ndakagumburwa pakati penyeredzi mbiri"la swedish bhaisikopo Nziyo kubva padhoro repiri (kubva muna2000), panoshandiswa mazwi nemitsara kubva munhetembo iyoyo.
Uye zvakare, iyo firimu yakahwina iyo Special Jury Prize kuCannes Film Festival.
Kunyangwe Vallejo achinyanyo kuzivikanwa nhetembo yake, chokwadi ndechekuti airidza angangoita marudzi ese ezvinyorwa uye humbowo hweizvi ndezvekuti nyaya, zvinyorwa, zvinyorwa, mitambo, nyaya zvinochengetwa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Nhetembo basa raCésar Vallejo
Julio Gallegos akadaro
Vallejo ndiye pasina mubvunzo anonyanya kukosha mudetembi wenguva yake. Yake repertoire yemabasa ndiyo muenzaniso wenguva yedu iripoyi.Iinogona kushandiswa seyakajairwa kutarisana nenguva yedu yakaoma yezvehupfumi.
Pindura kuna Julio Gallegos
Iwo Mipiro mabhuku
Mabhuku pasherufu yemabhuku. Nyaya nevanyori vezuro, nhasi nekusingaperi